Franck Kessie Oo Tijaabada Caafimaadka U Maray Kooxda Barcelona.
HomeWararka CiyaarahaFranck Kessie oo tijaabada caafimaadka u maray kooxda Barcelona.
March 23, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee AC Milan Franck Kessie ayaa lagu soo waramayaa inuu dhameystiray tijaabada caafimaadka Barcelona ka hor inta uusan u dhaqaaqin xagaaga soo aadan.
Laacibka heerka caalami ee dalka Ivory Coast ayaa diiday isku daygii Rossoneri ay ku dooneysay inay heshiis cusub kaga saxiixdo, waxaana lagu wadaa inuu si xor ah uga tago dhamaadka xilli ciyaareedkan.
Kooxaha sida Arsenal, Tottenham Hotspur iyo Manchester United ayaa dhamaantood lala xiriirinayay saxiixa Kessie, laakiin Barcelona ayaa la fahamsan yahay inay heshiis ka gaartay 25 jirkaan usbuucii hore.
saxafiga Fabrizio Romano ayaa soo wariyay in Kessie uu soo gabagabeeyay caafimaadkiisa Blaugrana oo uu horay ula galay heshiis afka ah oo ku saabsan €6.5m (£5.4m) mushaarkiisa sannadkii.
Romano wuxuu intaas ku daray in qandaraasyadu ay noqon doonaan kuwo rasmi ah oo la saxiixi doono “toddobaadyada soo socda”, taasoo soo afjaraysa Kessie shantii sano ee uu joogay San Siro tan iyo markii uu amaahdii ugu horreeyay uga yimid Atalanta BC 2017.
Kessie ayaa dhaliyay lix gool iyo hal caawin 30 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan iyada oo Milan ay 3 dhibcood ka sarayso Napoli oo hogaanka u haysa horyaalka Seria A .